» जनता र जनप्रतिनिधीबिच खरो सवाल जवाफ , ”हाम्रो ठाउँमा विकास खोइ ” ?
जनता र जनप्रतिनिधीबिच खरो सवाल जवाफ , ”हाम्रो ठाउँमा विकास खोइ ” ?
२७ मंसिर २०७७, शनिबार १२:१९
मनहरीमा सार्वजनिक सुनुवाई
मनहरी गाउँपालीकामा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधीहरुले आम जनताको समस्या प्रति चासो देखाउन थालेका छन् । हुन त यस अघि पनि जनप्रतिनिधीहरु गरीब असहाय र अपाङ्गको घरदैलोमै पुगी अवश्था बारे बुझ्ने र सरकारबाट प्रदान गरीएका सेवा सुविधा पाएका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै आएका छन् । यद्यपी सबै जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न समयको पावन्दीले गर्दा असक्षम भएको स्वीकार गर्छिन् गाउँपालीका उपाध्यक्ष मनिला विष्ट । यसको विकल्प स्वरुप गाउँपालीकाले प्रत्येक वडामा ”सार्वजनिक सुनुवाइ” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएका स्थानीयहरु :
कार्र्यक्रममा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यलयबाट प्रवाह भएका सेवा सुविधामा असुन्तुष्टि , विकास निर्माणको कार्यमा देखिएका बेथीती र आफ्नो गाउँठाउँमा विद्यमान समस्याको विषयमा जनप्रतिनिधीसँग प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । तर अन्य वडामा भन्दा वडा न ५ मा आम सर्वसाधरणले खुलेर जनप्रतिनीधीलाइ दुखेसो पोखे । मंसिर २४ गते वडा न ५ को बसन्तपुर स्थीत विध्यालयमा आयोजीत सार्वजनीक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई गाउँपालीकाका राजस्व शाखा प्रमुख राजेन्द्र प्र चौलागाइँले सहजिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाइ सहजीकरण गर्दै गाउँपालीकां राजस्व शाखा प्रमुख राजेन्द्र प्र चौलागाईं :
हेर्नुहोस , कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालीका वडा न ५ का स्थानीयद्धारा गरीएका प्रश्न र गाउँपालीका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले दिएको जवाफ जस्ताको तस्तै :
स्थानीय : हाम्रो गाउँमा ट्रान्समिटर ल्याएर थन्काएर राखेको २ वर्ष भयो । त्यसको जडान कहिले हुन्छ ? वडाअध्यक्षलाई गुनासो पोख्दा गाउँपालीकाले चासो दिदैन भन्नुहुन्छ । गाउँपालीकाले किन बेवास्ता गरेको ? त्यो ट्रान्समिटर देखाउन मात्रै ल्याइएको हो ?
उपाध्यक्ष विष्ट : गाउँपालीकाले चासो नदेखाएको होइन । हामीले यो काम गर्न पहिलेनै निर्देशन दिइसकेका छौँ । यस्तो कामको लागी तपाईहरु २ वर्ष सम्म धैर्य गरेर बस्नुनै गल्ती भयो । तपाईंहरुले वडाका प्रतिनीधीहरुलाइ झक्झकाउनु पर्ने थियो । उनीहरुले सामाधान नगरे तपाइँहरुको नजीकै गाउँपालीका कार्यालय छ । त्यहाँ आएर गुनासो पोख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो । ठिकै छ , हामी फेरी वडाअध्यक्षलाइ भनेर यो काम चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न लगाउनेछौ ।
स्थानीय : हाम्रो ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु किन हुँदैनन् ? सबै बजेट जती अन्य वडामा मात्र खन्याइन्छ ? वडा बाट योजना छनोट गरेर पठाएको पनि काँटछाँट भएर आउँछ ? किन यस्तो विभेद गरीयो हाम्रो वडालाई ?
उपाध्यक्ष विष्ट : पहिलो कुरा त तपाइहरुको वडामा विकास निर्माणका कामहरु नभएका होइनन् । पहिले पनि माननीय बिरोध खतिवडा , राजाराम स्याङ्तान ले धेरै पहल गरेर यो ठाउँमा भौतिक विकास निर्माण गरेका छन् । तुलनात्मक रुपमा अन्य दुर्गम वडाहरु भन्दा विकासमा यो वडाले फड्को पनि मारेको छ । तर हामीले सबै वडालाइ समान रुपमा विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको हुनाले यस्तो समस्या देखिएको हो । यद्यपी विस्तारै अघि बढाउदै जानेछौँ ।
अर्को कुरा वडा बाट छनोट गरेर पठाइएको योजनालाइ गाउँपालीकाले कहिले पनि काँटछाँट गर्दैन । हामीले पहिलेनै वडाका प्रतिनिधीलाइ निश्चीत बजेटको हाराहारीमा योजना लेराउनुस है भनेर निर्देशन दिएका हुन्छौँ सोहि अनुसार उहाँहरुले ल्याउने हो । तसर्थ गाउँपालीकाले धान्न सक्ने बजेट सम्मको योजना माग्नु होला, हामी अवश्य पुरा गर्नेनैछौँ । त्यस बाहेक अन्य अतिआवश्यक योजना छन् भने हामी प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भए पनि पुरा गर्नेछाँै ।
स्थानीयको सवालहरु टिपोट गर्दै उपाध्यक्ष विष्ट :
स्थानीय : कृषि उन्मुख हाम्रो वडा भएपनि आधुनिक कृषि औजारको अभाव छ यहाँ । भनेको बेला खाद्य मल पाउन पनि गाह्े छ । गाउँपालीकाको कृषी शाखाले के काम गर्छ ? उहि सरकारको ढुकुटि सक्ने मात्रै हो ?
उपाध्यक्ष विष्ट : विगतमा कृषि शाखाको कार्यदक्षता अपुग भएका कारण तपाइँहरुले भोग्नु परेको समस्याले हामी पनि लज्जीत छाँै । पहिलेका कृषि शाखाका कर्मचारीहरु दक्ष थिएनन् । कतिपय कुराहरु उल्टै किसानले सिकाइदिनु पर्ने अवश्था पनि सिर्जना भएको थियो । तर अहिले बिस्तारै सुधार गर्दै लगिरहेका छाँै । अहिलेका कर्मचारीहरु दक्ष भएपनि जम्मा ३ जना मात्रै छन् । सबै वडाहरु धाउनु पर्छ । त्यसैले अनुगमनमा तिब्रता दिन नसकेको हो । यसको पनि समस्या बिस्तारै समाधान गर्दै लैजानेछाँै ।
अनि कुरो आयो कृषि औजारको , हामीले अहिले पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते औजारहरु वितरण गर्दै आएका छँौ । विभीन्न समयमा यस्ता अनुदान वितरण गरिनै रहेका हुन्छौ । यस बारेमा वडाका प्रतिनिधीहरुसँग बुझ्दै गर्नुहोस । सँगसँगै प्रदेश सरकार सँग पनि समन्वय गरेर यस्ता औजारहरु हामी वितरण गरीनै रहनेछाँै । खाधान्न मलको लागी भने हामीले मापदण्ड भित्र पर्ने सहकारीहरुसँग समन्वय गरीरहेका छौँ । सहमती हुने बित्तीकै हामी सहजै बितरण गर्नेछौँ ।
स्थानीय : गाँउपालीकाले सबै वडामा त्यत्रो डस्टबिन (फोहर फाल्ने भाँडो ) बाँड्यो रे भन्छन् , हाम्रो वडाको एउटा स्कुलमा बाहेक अन्य कतै पनि देखिँदैन ? हाम्रो वडालाइ चाहिँ खोइ त डस्टबिन ?
उपाध्यक्ष विष्ट : हामीले डस्टबिन नबाँडेका होइनौ । पहिलो वर्षमै हामीले सम्पुर्ण गाउँपालीका भरीनै ५ लाख बराबरको डस्टबिन बाँडेका थियौँ । तर अधिकांश क्ष्ोत्रमा यसको दुरुपयोग भएको देखियो । कतिपय सडकहरुमा राखीएको डस्टबिन त अहिले गायब नै भइसक्यो । यसको लागी जबसम्म हामी आँफैले यसको महत्व बुझ्दैनौँ तबसम्म यसमा लगाानी गर्नुको औचित्यनै देखिएन । त्यसैले अब तपाइँहरुको जस्तै जनचेतना सबैतिर फैलीयो भने फेरीपनि यसका लागी बजेट छुट्याउन सकिन्छ ।